Mid ka mid ah click in ay si joogto ah u tirtirto taariikhda ugu baaqayaan iPhone
Macna ma laha inta aad ka phone tirtirto xogta, waxaa jira weli raad xogta ku hadhay telefoonka mar walba oo ay jiraan wax iska software dhowr halkaas in kaban karto, dhammaan xogta la tirtiro xitaa ka dib. Wondershare SafeEraser waa software ilaalinta gaarka ah macruufka isticmaala qalab. Waxay kaa caawinaysaa in si buuxda tirtiro qalab macruufka ah si looga hortago tuugada aqoonsiga marka iibinta qalab aad iyadoo hal click. Waxaa soo laabtay qalab aad gobolka Suuliyada nadiif ah sida uu ahaa markii kaliya oo ka mid ah sanduuqa. Software No awood u yeelan doonaan inay ka soo kabsadaan xogta ka dib markii la isticmaalayo Wondershare SafeEraser si aad u nadiifiso qalab aad.
Ilaali files shaqsi ah la SafeEraser Wondershare
Si joogto ah ka saar files tirtiray ka qalab aad la lahayn fursadaha soo kabashada
Taageerada dhammaan xogta ku saabsan qalabka ka pictures, videos, xiriirada, abuse wac, farriimo iwm
Daahiriyo files ka qalab aad si ay u dardar
Sida loo isticmaalo Wondershare SafeEraser in ay si joogto ah u tirtirto taariikhda ugu baaqayaan iPhone
Talaabada 5: Ka dib markii raajo la dhammeeyo, xogta gaarka kuu ah la soo daabici doonaa by dhinaca bidix ee suuqa kala SafeEraser ka segmented by qaybood. Calaamadee "Call History" sanduuq iyo riix "masixi Hadda" badhanka hoose ee suuqa kala si joogto ah u tirtirto taariikhda yeedha oo dhan.
Talaabada 6: In uu furmo suuqa soo socda, waxaa laguu keenay in doonaa inay ku qor erayga "tirtirto" si joogto ah u tirtirto xogta la doortay ka iPhone. Nooca 'tirtirto' iyo riix "masixi Hadda" button in ay tirtirto oo si joogto ah masixi taariikhda wac aad.
Ka dib taariikhda yeedho ayaa la tirtiray, waxaad ka heli doontaa ah "guul tirtirayaa" Fariinta sida arkay sawirka hoos ku qoran.
Sida loo kala cadeeyo calls seegay on iPhone
Fur app telefoonka ka screen guriga.
Tubada tab ugu dambeeyey ee hoose si aad u aragto diiwaankaas wac aad.
Tubada tab ah ayaa seegay ee edit ugu sareeya iyo tuubada hogaanka saxda ah, fiiri sawirka hoos ku siiyo.
Waxaad arki doontaa wax badhan cas oo ku ag yaal Guda wac seegay, ka jaftaa badhanka cas si ay u tirtirto yeedho seegay ama tubbada ah oo nadiif ah hogaanka si ay u wada cadeeyo oo dhan calls seegay.
Waxa kale oo aad mari karto yeedho seegay ee tirada ama la xiriir aad rabto in aad tirtirto oo ka jaftaa badhanka delete ee xaq u leedahay in ay tirtirto yeedho seegay.
Sidee in ay tirtirto record wac shaqsi on iPhone
Tubada tab 'Recents' ee hoose si aad u aragto diiwaankaas wac aad.
Tubada "Edit" ee xaq u sareeya oo ka jaftaa badhanka cas rikoorka shaqsiga wac aad rabto in aad tirtirto oo ayan ku jirin.
Waxa kale oo aad mari karto diiwaanka wac shaqsi Midig iyo tubbada badhanka delete muuqata ku tagay in ay tirtirto record yeedho.
Sidee in ay tirtirto diiwaanka wac FaceTime on iPhone
Fur app FaceTime ka screen guriga.
Liiska wicitaanada la soo bandhigi doonaa iyada oo tiro aad loo yaqaan oo la FaceTime
Switch dhexeeya video iyo maqal ah ku baaqay in menu ugu sareeya si aad u hesho macluumaadka xiriirka ee qofka aad raadinayso ah. Waxaad kaloo isticmaali kartaa bar raadinta si aad u hesho magaca qofka aad raadinayso.
Si aad u tirtirto log kasta wac FaceTime, ka jaftaa "Edit" ee xaq u sareeya oo ka jaftaa badhanka cas rikoorka shaqsiga wac aad rabto in aad tirtirto oo ayan ku jirin. Geedi socodka la mid tahay in uu taleefan caadi ah.